QM oo dhaleeceysey qudhgooyo 7 dhallinyaro ah oo Al-shabaab ay ka filisey Somaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
QM oo dhaleeceysey qudhgooyo 7 dhallinyaro ah oo Al-shabaab ay ka filisey Somaliya. [Akhris …]
Luulyo 12, 2009 12:00 b 0
Geneva, July 12 – QM ayaa si ballaadhan waxaa ay u cambaareysey fal gawrac ah oo dhagta dhiigga loogu darey 7 dhallinyaro ah maalintii Jimcaha ahayd iyaga oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Navi Pillay oo haysta guddiga sare ee QM u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegey in falkii ay ku kacdey kooxda Al Shabaab ee ay qoorta uga gooyeen toddobada dhallinyarada ah in uu dhan ka ahaa xuquuqda aadanaha iyo xeerarka u uga degsan QM arrimaha insaanka.
Waxaa uu si weyn u dhaleeceeyey falkaasi isaga oo ugu baaqey in ay u turaan dhinacyada Soomaalida ah shacabka iyo dadka taagta daran.
Dhinaca kalena waxaa uu ku eedeeyey kooxda Al Shabaab in ay la beegsato Moortarro iyo Madaafiic dadka rayadka ah iyo goobaha ay ku suganyihiin isaga oo sheegey in ay sidoo kale ku dhex dagaallaamaan maatida dhexdeeda.
Waxaa uu sidoo kale uu caddeeyey in ay sababeen kooxdaasi barakaca toddobannaan Kun oo qor oo labadii bilood ee ugu danbeeyey magaalada Muqdisho isaga tagey kaddib markii ay ku dagaallameen dawladda iyo kooxo ka soo horjeeda Afkaarta ay ku shaqeyso dawladda uu madaxweynaha u yahay Sh Shariif Sh Axmed.
Waxaa uu sheegey dadka rayadka ah, Saxafiyiinta iyo shaqaalaha Samafalkaba in ay yihiin dadka ugu badan ee lagu waxyeelleeyo dalka Soomaaliya waxaana uu ku baaqey in dhammaan ay ka waantoobaan kooxahaasi falalka ceynkaas ah.
Kooxo aad u badan oo u dooda xuquuqda Insaanka ayaa markii ay geysteen kooxda AL Shabaab ee ay ku dileen toddobada dhalinyarada ah waxaa ay markii u soo jeediyeen dhaleeceyn ku aaddan falkaasi.
Toddobada dhalinyarada ah ayaa kooxda Al Shabaab saraakiisheeda waxaa ay ku xukumeen dil kaddib markii ay ku soo eedeeyeen in ay ahaayeen jawaasiis iyo in ay ka horyimaadeen Daacadnimada Islaamka.
Somaliland oo sheegtay in goob shacabka ka caaggan laga dhigayo degaannada u dhexeeya Gabiley iyo Boorama ee ay colaaddu ka taagan tahay. [Akhris …]